mercredi, 03 mars 2021 19:19
Ianao no efa vonoiny, dia mbola ianao koa no mamelona azy
Ny gadra eto amintsika, sady efa namono, nangalatra, nanao ny tsy mety teto amin'ny fiaraha-monina, nefa izy indray no velomim-potsiny, anamboarana fonja manara-penitra.
Zon'olombelona mivadika, ianao angalarina, aholana indray no mandoa hetra amelomana ny mpangalatra sy ny mpanolana.
mercredi, 03 mars 2021 15:39
Oniversité Antananarivo Ankatso : Ahoana tsara moa ity tany lasan'olona ity
Mbola kely izahay, nanomboka teo amin'ny fiakarana 3 chemins io dia efa nisy vavahady, nisy gardien, ary voasava karatra izay hiditra eo.
Mbola feno ala sapin io Ankatso io tamin'izany, ary hifanenjehana amin'ny gardien ao mihitsy ny maka sapin de noël tao tamin'izany.
Ankehitriny, trano mijoalajoala, mpanao bizina fanafody, jerem-potsiny, ny tany rehetra samy mamefy ny azy ao anaty enceinte universitaire. Ny bar sy karaoke eny anelakelan-tranon'ny CUR moa tsy resahina intsony.
Mbola misy mpitantana ve eny ? Misy service domaine manao mutation ve ? Misy permis de construire ve ?
Ny jiron'ny Jirama aza moa eny no miainga taritina ary akana vola amin'ny manodidina eny mihitsy.
Etsy ankilany anefa ny tranon'ny mpianatra zara raha trano, ny wc aza dia anarany fotsiny ny an'ny maro, tsy misy fanorenana hafa intsony, ny eo tsy misy fanavaozana. Izay manana trano mamarotra ny fidirana ao rehefa hiala. Betsaka ireo tsy tokony hipetraka amin'izany fa mbola mibodo ao hatrany, nefa efa manam-bady aman-janaka, efa miasa mihitsy aza ny sasany.
Angola : Tonga ny 624 000 dozim-bakisiny Covid-19
Tonga any Angola ihany koa ny dozim-bakisiny 624 000 isa hiarovana amin'ny Covid-19.
Atao laharam-pahamehana amin'izao andihany izao ireo olona marefo sy ireo mpiasan'ny fahasalamana.
Fiaraha-miasa amin'ny OMS sy Angola izao.
mercredi, 03 mars 2021 13:00
Bois de rose bolongany 3 dia mahavita bourse mpianatra
Isika manana stock efa tapaka mitentina 4 milliard de dollar, tena tsy azoko tsy amarotana an'ireo efa tapaka ireo, dia ferana tsy misy mahazo manapaka hafa intsony, ary mamboly zanaka bois de rose mihitsy aza no tokony imasoana.
Sa aleo lo toy izay an-kavana?
Misy mitetika ny haka ireo bois de rose ireo amin'ireo mpandraharaha manana stock ara-dalàna manko no tena kajy ao ambadik'izy io, dia izy no hisera azy, dia fanonerana kely no atao an'ireo mpandraharaha izay manana fahazoan-dalana ara-dalana ireo.
ONE : Tsy nandray karama efa roa volana
Tsy mbola naharay ny karama volana janoary sy febroary 2021 ny mpiasan'ny Office National pour l'Environnement - Madagascar na ONE, miandraikitra ny tontolo iainana.
Mitaraina arak'izany ireo mpiasa, asa noho ny tsy fahaizana eo anivon'ireo mpitantana na noho ny tsy fisiam-bola.
Nisy fahamaizana moa ity birao tetsy Antaninarenina ity ny alin'ny 15 jolay 2020, ary mbola tsy fantatra hatreto ny vokatry ny fanadihadiana.
Vontovorona : Milamin-dratsy, oneran'ireo mpianatra ny latabatra tsenakely may
Nisy mpianatra 50 teo nivoaka ny faritry ny Polytechnique omaly hariva, nandrehitra kodiarana sy ireo hazo fanaovan'ny olona varotra legioma amoron-dalana, nametraka sakana tsy hidirana eny amin'ny faritry ny fampianarana.
mercredi, 03 mars 2021 09:34
Covid-19 : Tonga ao RDC ny dozim-bakisiny miisa 1.7 tapitrisa
Fiaraha-miasa teo amin'ny Repoblika demokratikan'i Kongo sy ny OMS dia tonga à Kinshasa RDC ny dozim-bakisiny hiarovan'ny amin'ny valanaretina Covid-19 miisa 1.7 tapitrisa amin'ny 6.9 tapitrisa natokana ho an'ny RDC.
Mpiaramiombon'antoka COVAX no namatsy izany.
mercredi, 03 mars 2021 08:16
Jirama : Fatiantoka 3 700 miliara ariary hoy ny Banky iraisam-pirenena
Matetipiavy ny talen'ny Banky iraisam-pirenena miandraikitra an'i Comores, Madagasikara, Maurice ary Mozambika, ramatoa Idah Z. Pswarayi-Riddihough, nisarika ny sain'ny maro momba ny fitantanana eo anivon'ny Jirama.
15% n'ny Malagasy ihany hoy izy no misitraka herinaratra eto Madagasikara, nefa tsy haitraitra izany fa hiakinan'ny aina sy ny fampandrosoana ara-toekarena tokoa. Hita izany hoy izy tamin'ireny fihibohana fiarovana tamin'ny valanaretina Covid-19 ireny, raha nisy herinaratra sy jiro ary internet dia afaka nanohy nianatra sy niasa tany an-trano izay rehetra tsy maintsy nanao izany.
Mila vola be anefa ny fotodrafitrasa ahatongavana amin'izany. Ilaina hoy ity talem-paritry ny Banky iraisam-pirenena ity ny fanavaozana ifotony ny fitantanana eo anivon'ny Jirama, tsy hoe esorina ireo nahazo tombony tamin'izao rafim-pitantanana izao, dia omena olon-kafa indray ny fanohizana ny fitsetsefana, fa tena omena ny sarambambem-bahoaka tena mila izany ny fisitrahana ara-drariny amin'ny vidiny takatry ny maro no atao.
mercredi, 03 mars 2021 08:10
Lahady Samuel : Nodimandry teo amin’ny faha-90 taonany
Nindaosin’ny fahafatesana ny alin’ny Talata 2 marsa 2021 i Lahady Samuel.
Efa Governoran’ny faritany mizakatenan’i Toamasina tamin’ny Repoblika faharoa izy. Efa lehiben’ny Faritanin’i Toamasina. Efa ambasadaoro tany Alzeria sy Alemaina ihany koa.
90 taona i Lahady Samuel izao nodimandry izao.
mercredi, 03 mars 2021 08:09
3 mars : Journée mondiale de la vie sauvage.